Avy any Kailua-Kona mankany Honaunau miaraka amin'ny mijanona amin'ny lalana miverina
Miala ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kona Danita Delimont / Getty Images
Fomba tsara handaniana andro iray raha mijanona any amin'ny iray amin'ireo toeram-ponenana ao amin'ny faritra Kohala ao amin'ny nosin'i Hawaii, ao amin'ny Nosy lehibe, ianao dia hitondra fiara fiteteana amin'ny morontsirak'i Kona. Eo am-pandehanana, hahita sary mahafinaritra ianao ary hanao fiantsonana vitsivitsy izay tena ankafizinareo. Ity sarintany Google ity dia hanampy anao hamolavola ny dianao sy hampiseho anao ny toerana misy ny fijanonana eo an-dalana.
Ny fahombiazana dia hoe raha mijanona any amin'ny iray amin'ireo toerana lehibe izay manakaiky ny morontsirak'i Kohala ianao dia tonga any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kona, nanofa ny fiaranao, nankany amin'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina ary nanao turn turn left teo amin'ny Queen Ka 'ahumanu Hwy (H-19) ho an'ny fiara avaratra mankany amin'ny toeram-ponenanao.
Betsaka ny mpitsidika tsy mahazatra no mamantatra izay mety amin'ny zon'ilay fiverenan'ny seranam-piaramanidina, manerana ny Nosy Kona.
Hanombohanay ny dianay mandritra ity andro ity any amin'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina, satria tsy fantatro ny toerana hijanonanao any avaratra na raha mbola mijanona ao Kailua-Kona ihany ianao.
Ny fomba mahomby indrindra hanaovana ity fiara ity dia ny mijery ireo tranonkala amin'ny faran'ny lavitra indrindra ary mamarana ny fiara ao amin'ny tanànan'i Kailua-Kona izay ahafahanao mividy, mijery ireo toerana ary manana sakafo hariva amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana tsara tarehin'ny tanàna.
Ny fiara mankany amin'ny fiatoana voalohany dia mitondra antsika miankandrefana eny amin'ny làlambe lehibe. Mazava ho azy, ho an'i Hawaii, ny lalana dia hanova anarana in-telo eny an-dàlana ary hanova tarehimarika haingana indray mandeha. Ny voalohany antsoina hoe Queen Kaahumanu Hwy (H-19) dia hivadika ho Lalamben'i Kuakini (H-11) ary avy eo ny Mamalahoa Highway (H-11). Mijanòna hatrany atsimo amin'ny seranam-piaramanidina manodidina ny 27 kilaometatra. Tokony hitondra anao 45 minitra eo ho eo sy ora arakaraka ny fifamoivoizana.
Arovy ny masonao ho an'ny City of Refuge Road (jereo ny sari-tany). Rehefa tonga eo ianao dia manao fihodinana mivantana. Fiverenana sarotra izany, koa raiso tsikelikely izany. Hiantso any avaratra andrefana ianao. Ao anatin'ny iray kilaometatra eo ho eo dia hahita famantarana ho an'ny Roaded Church Road ianao. Ity no fijanonana voalohany.
The Church Painted
Fiangonana katôlika Saint Benedict. Andrea Sperling / Getty Images
Ny fiangonana katolika Saint Benedict, na fantatra amin'ny anarana hoe The Painted Church, dia fiangonana mavitrika ary voasoratra ao amin'ny rejisitry ny fanjakana manan-tantara any Hawaii ary ny National Register of Historic Places. Vita ny varavarana mandritra ny andro.
Tonga avy any Belzika ny Papa John Velghe tamin'ny taona 1899. Niaraka tamin'ny fiangonana, dia rava ny fiangonana ary nifindra tany amin'ny toerana misy azy. I Father Velghe dia nandoko ny atin'ny fiangonana niaraka tamin'ny isa ara-Baiboly sy ny sehatra izay mampiseho ny fiainan'ny olomasina marobe. Izy rehetra dia natao tamin'ny loko tsotra. Ireo sary hosodoko dia nanampy azy tamin'ny adidiny pastoraly satria maro tamin'ireo Hawaiiana no tsy nahay namaky.
Vetivety fotsiny ity, fa iray monja ny fitsidihana. Aza hadino ny mamela fanomezana kely ao anaty boaty eo am-baravarana.
Ny fiatoana manaraka dia manodidina ny 4.5 kilaometatra na 13 minitra miala. Miankandrefana ao amin'ny City of Refuge Road ary hahita marika ho an'ny Park National Park any Pu'uhonua o Honaunau.
Ireo Hawaiianina fahiny dia niaina tamina karazam-pitsipika feno lalàna izay na dia ny ali'i na ny mpanjaka aza dia voatery nankatò. Amin'ny ankamaroan'ny ohatra, ny sazy noho ny famongorana ny iray amin'ireo lalàna ireo, na kapu, dia ny fahafatesana.
Ny hany fomba handosirana dia ny hahatongavana amin'ny antsoina hoe Pu'uhonua, na toeram-pialofana. Niparitaka nanerana ireo nosy ireo toeram-pialofana ireo. Raha vantany vao tonga ianao, dia voaro amin'ny sazy rehetra.
Ny Valam-pirenena National Park Pu'uhonua o Honaunau no lehibe indrindra amin'ireo toeram-pialofana tsy maty. Notohanan'ny National Park Service izy io ary misy vola kely hiditra ao amin'ny Park. ($ 5.00 isaky ny fiara.)
Mialà sasatra farafaharatsiny mba hijerena ny antony. Hianatra zavatra betsaka momba ny kolontsaina fahiny, ny fivavahana ary ny haitao taloha ianao. Azonao atao ny mahita ny sarin'ny valan-javaboary ary mijery sary vitsivitsy ao amin'ny fonjan'i Pu'uhonua o Honaunau National Historical Park - Ny Tanin'ny Refuge.
Kaalakekua Bay State Historical Park
Rehefa mandao ny Valan-java-pirenena ianao, dia miantsoa miantsinanana ary mankany amin'ny faritra avaratrandrefana amin'ny alàlan'ny City of Refuge Road izay mamakivaky ny morontsiraka. Rehefa afaka 5 minitra eo ho eo ary 9-10 minitra, dia hohohy hatrany amin'ny lalana Puuhonua izay midina mankany amin'ny ranomasina ao amin'ny Kianjika Bay State Historical Park.
Amin'ny tranokala tsara tarehy na lopy tsara tarehy eo amin'ny fakantsarinao, azonao atao ny mijery ny ando ary mahita ny Capone Cook Monument. Tany amin'ny toerana teo amin'ny Nosy Big ilay Kapiteny James Cook, voalohany nipetrahana tao amin'io nosy io tamin'ny taona 1778. Cook no mpikaroka britanika voalohany nifandray tamin'ny Hawaiiana. Ny Hawaiiana dia nino fa izy no andriamaniny Lono. Tany no nahafatesan'i Cook tamin'ny ady tamin'ny Hawaiians tamin'ny taona 1779 rehefa niverina tany amin'ilay nosy izy.
Ity no toerana tsara hialan-tsasatra ary angamba manaikitra raha hihinana sakafo maraina ianao rehefa mitondra sakafo fiaramanidina miaraka aminao.
Kona Coffee Living History Farm. Sary an'i John Fischer
Rehefa miala ny zaridaina ianao dia miditra an-tanety ary ambony avo indrindra. Manaova ankavia mianakavy mankany Lower Napoopoo Road ary manohy ity lalana mihodinkodina ho an'ny 4.5 kilometatra ity mandra-pahatonganao any amin'ny fiaran-dalamby amin'ny Highway 11. Manaova fihodinana mivantana. Ho hitanao amin'ity ampahany amin'ny lalambe ity ny andro nialanao tany atsimo. Hiankavia kely kokoa mihoatra ny 1/2 kilaometatra ianao. Ny toerana hodianao dia ho eo amin'ny ankavanana, ny Kona Coffee Living History Farm .
Ny faritra Kona ao Hawaii no fantatra indrindra amin'ny tranon'ny Kona Coffee, izay heverin'ny maro ho kafe tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Niparitaka nanerana an'io faritra io ny toeram-pambolena kafe an-jatony. Betsaka no mbola zafikelin'ny taranaky ny Japoney mpamboly tany am-boalohany izay nitombo kafe tany amin'io faritra io tamin'ny faramparan'ireo taona 1800.
Ny Kona Coffee Living History Farm dia toerana tsara indrindra hianarana momba ny tantaran'i Kona Coffee sy ireo olona izay mitombo. Ny Farm dia misokatra amin'ny alatsinainy - Alakamisy, miaraka amina vavahady misokatra amin'ny 10 ora maraina sy farafaharatsiny amin'ny 2:00 tolakandro. Aoka ho azo antoka fa misy eo amin'ny iray ora tolakandro hariva mba hahafahanao manana fotoana ampy hanaovana fitsidihana feno. Ny fidiram-bola dia $ 15 ho an'ny olon-dehibe ary $ 5.00 ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 12, Tsara ny vidiny.
Tian'ny kafe any Greenwell Farms. Sary an'i John Fischer
Ankehitriny ianao vao nianatra momba ny tantaran'i Kona Coffee, fotoana hitsidihana toeram-pambolena kafe. Rehefa miala ny Kona Coffee Living History Farm dia mamela ny havia amin'ny Highway 11 ary mitondra fiara maherin'ny 2 kilaometatra miverina mankany Kailua-Kona. Tandremo ny marika ho an'ny toerana misy anao, izay ho eo ankavia, Greenwell Farms.
Greenwell Farms dia iray amin'ireo lehibe amin'ny toeram-piompiana Kona Coffee. Tsy vitanao ny hanavaka ireo vokatra avy amin'ny kafe. Ankoatr'izay dia afaka mitsidika toeram-pambolena maimaim-poana ianao izay hitondra anao any amin'ny kianja kafe. Hahita ihany koa ny fomba hanangonana kafe sy hanitra. Ny fitsangatsanganana dia mihazakazaka tsy tapaka amin'ny 8:30 maraina hatramin'ny 4:30 alina, alatsinainy ka hatramin'ny alahady.
Amin'izao fotoana izao dia tahaka ny amin'ny faran'ny tolakandro. Vetivety monja no hijanonanao alohan'ny hahatongavana any amin'ny toerana farany misy anao. Izany no Kahaluu Beach Park ao amin'ny faritr'i Keahou ao amin'ny morontsirak'i Kona.
Rehefa miala ny Greenwell Farms dia mamela ny havia eo amin'ny Highway 11 ary mivoaka avaratra. Rehefa afaka tokony ho 6.5 kilaometatra dia makà havia hizaha ny lalana Kamehameha III. Ireo famantarana dia hitarika anao any Keahou. Rehefa afaka iray kilaometatra sy antsasakadiny dia miantsoa ny al'i Ali aho Drive. Any amin'ny 2 kilometatra eo ho eo dia hahita zaridaina mahafinaritra sy zaridaina eny ankavia miankavanana ianao. Ity ny Kahaluu Beach Park. Eo akaikin'ilay trano fisakafoanana Keahou Beach ankehitriny.
Nakatona ny toeram-ponenana tamin'ny faran'ny taona 2012. Ny Sekoly Kamehameha, izay manana ny toeram-pitsangatsanganana, dia mikasa ny handrava ny toeram-ponenana, hamerina amin'ny laoniny ny tranokalan'ny tany, tany am-piandohana, ary hampiasa ny fananana ho an'ny tanjona ara-kolontsaina sy ara-panabeazana.
Miankina amin'ny toetry ny fandravana, mety ho azonao atao ny mandeha any amin'ny Hapaialii sy Keeku Heiau vao haingana.
Avy any amin'ny valan-java-baventy no ahitanao mpirahalahy matetika any amin'ny Bay Kahaluu ary mety ho hitanao ny iray amin'ireo sambo lehibe Hawaiiana na honu izay matetika ilay faritra.
Ali'i Drive ao amin'ny Village Kailua. Sam Antonio / Getty Images
Rehefa mandao ny kianjan'i Kahaluu Beach ianao, tohizo ny Ali'i Drive mandritra ny 5 kilaometatra ary ho marina ao am-pon'ilay tanàna manan-tantara Kailua ianao. Kailua Village dia antsoina matetika hoe Kailua-Kona mba hanavahana azy amin'ny tanàna Kailua ao amin'ny nosy Oahu.
Kailua-Kona dia manana fividianana lehibe ary koa trano fisakafoanana be. Amin'ny fotoana hahatongavanao dia mety ho fotoana hisakafoanana izany. Manoro hevitra aho fa hijanona ao an-tanàna ianao ary hihinana. Iray amin'ireo trano fisakafoanana tiako indrindra i Huggo. Mahavariana ny fahitana an'ilay toerana, indrindra rehefa nilentika ny masoandro. Misy ihany koa ny sakafo tsara indrindra ao amin'ilay nosy.
Ity dia andro feno fahasambarana ary mbola nikasika ny vitsivitsy amin'ireo toerana maro hijerena sy ireo zavatra tokony hatao eo amin'ny morontsirak'i Kona Big Island.
Tadidio ny mijery ny sarintany Google lehibe sy ny torolàlana mankany amin'ny toerana izay noresahinay.
Ahoana no hamandrihanao ny fiaramanidina ho any Hawaii
Ny toerana tsara indrindra any Hawaii ho an'ny fianakaviana
Fikarakarana ireo saram-panafarana fanampiny sy ny fandoavam-bola rehefa mandeha any Hawaii
Boky napetraka tany Pasifika Atsimo
Hety sakafo any Hawaii
Ny 8 Best Golf Bags hividy amin'ny 2018
Hanal Pixán: Andron'ny maty eo anivon'ny Maya
Florida Staycation: Golf Home Rentals dia mahazo ny mari-pahaizana ao Orlando
Mandeha fiarandalamby miaraka amin'ny Society of Historic Conservation Reno
Fety sy fisehoan-javatra any amin'ny faritra manan-tantara May 2018
Lisitry ny trano fisakafoanana ao Manhattan
Fialan-tsasatra tsara indrindra an'ny Berlin
Ny National Hall of Fame sy Museum
Ny fomba hitsidihana an'i Santa ao Macy any New York
Manhattan mahazo ny kafe voalohany ao amin'ny Purr-Manent Cafe ao Meow Parlor